နင်လားဟဲ့ ဂဠုန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နင်လားဟဲ့ ဂဠုန်
Posted by ရာဇ၀င္လူဆိုး on Jul 18, 2012 in Creative Writing | 11 comments
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃မှာ.. ဗိုလ်ချုူပ်မွေးနေ့ပါ…အစချီပြီး…
မျက်ရည်သွန်လို့ ဘဝင်ငြိုး..ဂျူလိုင် တစ်ဆယ့်ကိုး….တဲ့….
ဒီကဗျာလေးကို စထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ကလေးအရွယ်ကတည်းက ဗိုလ်ချူပ်ကို လေးစားအားကျခဲ့ရပြီး ငယ်သေးတော့နားမလည်နိုင် မသိခဲ့နိုင်တာက ဘယ်သူတွေက သတ်သွားရက်တာလဲ၊ ဘာတွေများလိုချင်လို့လဲ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဂျူလိုင် ၁၉ ဥဩသံတွေကြားတိုင်း ခေါင်းကိုငုံ့ ငြိမ်သက်စွာနဲ့ အလေးပြုရင် မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရဖူးပါတယ်..။ နောက်ဂဠုန်ဦးစော နဲ့ အပေါင်းအပါတွေ အားဏာရူးတွေသတ်တာသိလာရတော့ ကလေးစိတ်နဲ့ ရွံလွန်းလို့ ရပ်ကွက်ထဲက အဖေ့ သူငယ်ချင်း ဦးစောကိုတောင် ခပ်ငယ်ငယ်က စကားကိုမပြာတာ။ ဗိုလ်ချူပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ လက်လှမ်းမှီသလောက်လေ့လာကြည့်တော့ ဒီလူ ဦးစောအကြောင်းလဲ ပါလာပြန်ရော..။ သူ့မှာတော်တဲ့ အချို့အချက်တွေရှိပြီး လူတော်တစ်ယောက် လို့ယေဘူယျပြောလို့ရပေမယ့် လူကောင်းတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့တာတော့ သေချာတယ်..။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေက ဟိုးအရင်ကဖတ်ခဲ့တာဆိုတော့ တော်တော်တော့မေ့နေပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ရှေမှီနောက်မှီများနဲ့ သိတဲ့သူများပြောပြစေချင်ပါတယ်.။ သူ့ရဲ့ ယုတ်မာအောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်ရခြင်းရဲ့ တွန်းအား၊ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာပေါ့။ သေချာတာကတော့ ကျနော်တို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက မုန်းတယ်..ရွံရှာစရာတစ်ခုလိုမျိုးကို မုန်းကြတယ်..။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို စစ်ကျွန်ဖြစ်အောင်၊ ခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ကျနော်တို့ နိုင်ငံနိမ့်ကျသွားခဲ့ရတဲ့ လက်သည်တရားခံဟာသူပဲလို့ ကျနော်မြင်မိတယ်။ ခုလက်ရှိတိုင်ပြည်အခြေအနေ ဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာ သူတိုက်ရိုက် လုပ်တာမဟုတ်ခဲ့ဘူး လို့ ငြင်းခဲ့ရင်တာင် ဒီလိုဖြစ်ဖို့ သူလုပ်ရပ်ဆီက မြစ်ဖျားခံလာတယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။ တကယ်လို့များ ဗိုလ်ချူပ်သာ ဒီလိုမဖြစ်ပဲ သက်တမ်းစေ့ နိုင်ငံတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗျာ..။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ကျနော်တို့ ခံစားနေရပါပြီ…တကယ်လို့များ……တကယ်လို့များ
PS: အာဇာနည်နေ့မှာ ဗိုလ်ချူပ်တို့ပုံတွေ မတင်ပဲနဲ့ ဂဠုန်ဦးစော ပုံတင်လို့ တစ်မျိုးတော့ မထင်နဲ့။ သူ့ပုံကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည်ု့ပြိးတော့ကို….
အဟက် အဟက်..အာဇာနည်နေ့မှာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကို….ခုတောင် ဒါ့ပုံကို …ပရင့်ထုတ်ပြီးတော့ကို …….:)
ဘာလို့ဂဠုန် ဆိုပြီး တပ်ခေါ်တာလဲဟင်..
တစ်ဖက်ပို ့စ်မှာတော့ “မင်းလဲ ဂဠုန်လဲတူလာပီ”လို ့ပြောခံရ ရာမှာ
အဲ့နာမည် တွင်သတဲ့ အူးးးးးးဗိုက်ရာ။
ခုလက်ရှိတိုင်ပြည်အခြေအနေ ဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာ သူတိုက်ရိုက် လုပ်တာမဟုတ်ခဲ့ဘူး လို့ ငြင်းခဲ့ရင်တာင် ဒီလိုဖြစ်ဖို့ သူလုပ်ရပ်ဆီက မြစ်ဖျားခံလာတယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။ လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ သူရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ အခုအချိန်ထိ နလန်မထူနိုင်သေးဘူး ။ နေဝန်း ၊စောမောင်၊သန်းရွှေတို့ နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေကို အခုအချိန်ထိ ဆေးကုနေရတုံးဘဲ။
ကျုပ်တို့ရင်ထဲက သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ အာဇာနည်ကိုးဦးသာ မကျဆုံးခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုအချိန်မှာ
ကျုပ်တို့နိုင်ငံက ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှာကို ဘယ်သူငြင်းမလဲ
နေဝင်း ပါ….။ ဘယ်နဲ့ နေဝန်း ဖြစ်နေရတာလဲ နာ့နာမယ် ပြောင်းရမလိုဖစ်နေပြီ….။
ကျော်လဲ ဒီဂဠုန်အကြောင်းကို ပြောရရင် ဂယ်သိပ်မသိဘူး…ဒါကြောင့် သိသူများဝင် ဆွေးနွေးစေချင်တာ..တကယ်သိပ်မသိလို့။
စာတောင်မဖတ်သေးဘူး ပုံမြင်တာနဲ့ဖတ်ချင်စိတ်ကုန်လို့ နာမည်ကြားမဖတ်ချင် မကြားချင်ဘူး ဒါကြေင့်မန့်တော့မန့်ခဲ့တယ် သူပုံကိုတင်ထားတာကိုက ကျက်သရေ မရှိသလိုခံစားရတယ် ရိုင်းသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် ။။ရွာသူရွာသားအပေါင်းကိုခင်မင်လျှက်စနိုး။။
ဪ..ကျနော်ကလဲ ဒီဂဠုန်ကို ဆဲစေချင်လို့ကို တင်တာပါဆို ။ ပြီးတော့ သူယုတ်မာခဲ့တာတွေ ၊ သူလုပ်ရပ်တွေ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက သူကို ဒီလိုလုပ်ရပ်ဆိကိုတွန်းပို့ခဲ့သလဲဆိုတာ လူကြီးတွေပြောတာ ကြားချင်လို့.(စာဖတ်အားကောင်းတဲ့ ရွာသူားတွေဆိကရော).။ ဒါတွေသိထားတော့ ခုခေတ်မှာ ဒုတိယ ဂဠုန်ပေါ်လာခဲ့ရင် ကျနော်တို့… ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်အပေါ်ကို ဘယ်လို back up လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာ ကြိုတွေးထားလို့ရမယ်..။ ဟိုတလောက ပို့စ်တစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်..။အမေစုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အားနည်းနေတာကို ထောက်ပြပေးသွားတာ..။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုတွန်းအား၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ၊ဘယ်လိုလူစာမျိုးတွေက ဒုတိယ ဂဠုန်တွေဖြစ် ပေါ်လာနိုင်မလဲ ကျနော်တို့ သတိထားရမယ်လေ…။ ဒါမှ ဒုတိယ အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ မရှိမှာ..။
ဦးစော…..သူဟာ လူတော် တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူကောင်းတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့လောက်ဘူး။
လူတော်ပြီး လူမကောင်းရင် သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ လောက အတွက် သိပ်အန္တရာယ်များတယ်။
လူက ဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲ.. လူတိုင်းမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး…..
ဦးစောမှာ တိုင်းပြည်အာဏာကိုလိုချင်တဲ့““ လောဘ””သာ မရှိခဲ့ရင်…
ဦးစောမှာ သတ်ဖြစ်လောက်အောင် လောဘမြောက်ပေးတဲ့ ““ဒေါသ””သာ မရှိခဲ့ရင်……..
ဦးစောသာ ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် မနာလို ဝန်တိုဆိုတဲ့ ကိလေသာဆိုးတွေ မဝင်ခဲ့ရင်……..
အဲဒီလို ဦးစောမှာ ကိလေသာ တွေကြောင့် လုပ်ကြံမှုကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အဲဒီကိလေသာတွေကပဲ ..ဦးစောဆိုတဲ့လူကို……………………………..
ရာဇဝင်လူဆိုး ပြောသလိုပဲဗျာ…. ဗိုလ်ချုပ်သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အခုလို အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး …. သူများတွေနဲ့အတူတူ ရင်ဘောင်တန်းပြီး နေနိုင်တယ် …. လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတစ်စုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပျက်စီးပြီး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကွယ်လွန်သွားတာကို အရမ်းရင်နာမိတယ် … နှမြောတသခြင်းများစွာဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားစွာဖြင့် အလေးပြုမိခဲ့ပါသည်။
အဖေထက်ပိုထက်မြက်ဟန်ရှိတဲ့.. သမီးတယောက်လုံး.. မြန်မာပြည်ကရထားတာပဲဗျာ..
ခက်တာက.. အဲဒီကံကို.. ဘယ်လိုသုံးစွဲရမှန်းမသိ.. ဖြစ်နေကြတာ…
အဲဒီ ကောင်းတဲ့ကံ ကို မကောင်းတဲ့ ကံ တွေ က ပိတ်ဆို့ ထားနေနိုင်တာ လဲ ကျွန်မ တို့အားလုံး ရဲ့ ကံပါဘဲ။
ကျိမ်စာလေ သူကြီး ရဲ့။ ကျိမ်စာ။ မသိဘူးလား။